mhando 0.3.8 – Language kuonekwa
Zvita 20, 2009 kubudikidza chipo Leave a Comment
Shanduro iyi anowedzera vasabatwa mitauro nokuda Website vashanyi (inobva mubrowser nhaurirano – geoip inogona kuwedzerwa kana mubereko yakakwana kucharatidzwa). Zvinoitawo anotsigira itsva `rel = canonical` vari Wordpress itsva (2.9) rakabudiswa zuro. Zvatinosiita mugove Assorted bugfixes vari pano. Uye zvakare tinoda kukutendai Kevin Hart atibatsire.
Uyu ndiwo okupedzisira shanduro kuti pamutemo kutsigira Wordpress 2.7, sezvo tinenge nani kupedza shoma yedu pfuma iri kuvandudza pane kutsigira akwegura remitemo chawo. Nokuti munhu achishandisa mutana Wordpress tine mazano maviri: 1. ndiwedzere. kana 2. shandisa tsaru transposh kusunungurwa. The toronga ramangwana richange zvakafanana, kamwe Wordpress 3.0 vachaparadzwa panze isu achadonha rutsigiro 2.8. Chero vataure ichi vachagamuchirwa.
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: kuduku, rusununguko, RSS, Wordpress 2.8, Wordpress 2.9, Wordpress plugin